Kusarudza Professional Law Firm muUAE | Mutemo Makambani Dubai
Kusarudza Professional Law Firm muUAE
Gadzirisa Nyaya Dzemutemo
Kusarudza yakanyanya kana yepamusoro nyanzvi yemutemo femu mu UAE nenyaya yako yemutemo hazvisi nyore nguva dzose, sezvo paine zvakawanda kunze uko. Nekudaro, mafemu emutemo anouya akasiyana emhando uye saizi, uye ivo vanoronga kubva kune imwe chete yemutemo magweta maitiro kune akawanda-vashandi vashandi mafemu.
yepamusoro mutemo femu inowanikwa muDubai
Kubatsira iwe nekudzora maitiro
Zvichienderana nehurema hwenyaya yako yemutemo, pane akati wandei mutemo mafemu ekuti usarudze kubva, uye iwo anowanzopunzika nezvinhu zvinoverengeka senge saizi, rudzi rwedzidzo, yemuno, kana nyaya yemutemo.
Kana munhu achitanga kugara mujeri, pfungwa yavo yekutanga ndeyekuti abude nekukurumidza. Nzira yakajairwa yekunyatsogadzirisa izvi kutumira bail. Kana izvi zvaitwa, munhu akasungwa anotenderwa kuenda, asi aine mamiriro ekuti avele mudare kana adairwa. Mune ino chinyorwa, iwe uchaona iyo nzira yepamutemo inodikanwa kuti uburitswe pabheji muAU.
Mhando dzeMutemo mafemu
Munzvimbo zhinji, mafemu emutemo ndeemhando dzakasiyana siyana, uye anosanganisira:
Solo Mutemo Inosimbisa
Iro zita rinoratidza zvakajeka kuti nderupi rudzi rwekambani yemutemo iyi. Inoitwa netauro rimwe chete. Varapi veSolo vanowanzobata nyaya dzemutemo pane dzakasiyana siyana- zvinosanganisira kukuvara iwe pachako, mutemo wemhuri, nezvimwewo kana ivo vanogona nyanzvi mune imwe nharaunda, semutemo wepfuma.
Kubatsira kukuru kwekushanda nemawoko emutemo mafemu ndeyekuti zvakachipa, zvisingachinjiki pakushanda vashandi kunze separagals nenyanzvi dzezvemitemo uye nekupa kutarisisa kwakawanda nekuti gweta rinenge richishanda pane imwe nyaya panguva.
Diki Mutemo Firms
Aya mafemu emutemo anozivikanwa zvakare se "boutique" law firms. Ivo vanoshandisa vangangoita maviri kana gumi magweta - izvo zvinoita kuti zvive nyore kune magweta kubatana pamwe nevamwe pazvinhu zvakaoma zvemutemo. Aya mafemu emutemo ane manzwiro emakambani ega emutemo mafemu nekuda kweboka repedyo remagweta. Vanobvumidza kumiririrwa pamhando dzakasiyana dzenyaya.
Yakakura Mutemo Inosimbisa
Aya anonzi zvakare mafemu “akazara- mabasa”, uye anogona kubva pamazana gumi nemaviri magweta uye vashandi kusvika kuzviuru. Unogona kuvawana nemahofisi mumaguta kana nyika dzakasiyana. Mazhinji mafemu makuru anoverengera munenge munzvimbo dzese dzemutemo uye anowanzove nemadhipatimendi mahombe akadai sezvivakwa, makambani uye mapoka emabasa.
Transactional vs Litigation Mutemo Inosimbisa
Mafemu emutemo anoratidzirwawo nevemabasa avo epamutemo, semuenzaniso, kambani yemutemo inogona kutarisa chete kutongwa kunomiririra mutengi mudare kana inogona kutarisa nezvekutengesa zvinhu, izvo zvinosanganisira akawanda mapepa ane chekuita, nharo, inishuwarenzi, uye zvivakwa.
Mitemo Yekupara mhosva Inosimbisa
Mamwe mafemu ezvemitemo anoverengera kuchengetedza kwemhosva kubva kupara mhosva, DUI, uye dzimwe mhosva uye kazhinji anomiririra vatengi vanogona kugamuchira magweta avo ekudzivirira. Munhu anenge akatarisana nemhosva dzaakapara kazhinji anokwereta gweta redziviriro yemhosva kuti abatsire kuburikidza nematsotsi ekuzviita kuti asunungurwe kana kudzikisira zvirango zvakakurisa zvinowanzobatanidzwa nemhosva dzaakapara.
Ungaita Sei Iwe Kusiyanisa Iwo Fesiti Law?
Akabvumidzwa neHH Dare raMutongi kana Dhipi Dhipatimendi Rezvemitemo
Chero mutemo wezvemunyu unofanirwa nemunyu wake unofanirwa kunyoreswa zvakanaka uye kurongeka. MuDubai semuenzaniso chero kambani yemutemo iri kubatsira varidzi veSME inofanirwa kupihwa mvumo neHurumende yeDubai Legal Affairs Dhipatimendi, muboka rinotonga uye rinotonga kunyoreswa kwemafemu ezvemitemo, vamiriri, uye vanoita zvemitemo mumahofisi eDubai.
Vatengi vanowanzobhadhara magweta mazuva ano zvichibva pane kwavo ruzivo munharaunda yepamutemo yavanodzidzira mairi. Iwe unoda magweta ane hudzamu hwekuziva uye ruzivo mune ino nzvimbo inoenderana nezvavanoda, uye uku ndiko kwechokwadi kana kufunga kwehunyanzvi uhwo unoparadzanisa rimwe Gweta kubva kune mumwe.
Mamwe mafemu akatora nzira dzekutungamira kwadzinounzwa yekuita sevhisi inovaita vakasiyana nevamwe kubva vachiri kuita zvechinyakare mamodheru. Aya mafemu anomira achienzaniswa nevanokwikwidza nekuda kwekushandisa kwavo tekinoroji, maitiro evashandi, kutonga kwepamutemo kwepamutemo, nekuvandudza maitiro pamwe nedzimwe nzira. Kusvitswa kwesevhisi kunopa mutsauko unoita yakasimba pamusoro pevanokwikwidza.
Boka diki uye rakasarudzika vanozvisiyanisa pachavo zvichibva padigree. Ivo vanotora magweta kubva kuzvikoro zvepamusoro zvemitemo uye / kana ma federal secretary, izvo zvinowanzogadzira kusanzwisisika kwekunze kwevakadzi vepfungwa nevarombo vekumatare. Kunyange zvakadaro, izvi zvinodhura vatengi zvakanyanya mukushandisa masevhisi egweta kubva kune emutemo femu kudaro. Kazhinji aya magweta anotarisira kumisika yepamusoro-inodikanwa.
Kududzirwa kwemitemo yeAUE nemirairo
Iko kusimudzirwa kwegweta kunouya kubva kune chokwadi uye nekunzwisisa kweMirairo nemirairo. Nekudaro zvakajairika kuti marongero akasiyana ashandiswe munyaya yepamutemo kunyangwe mhedzisiro yacho ingave yakafanana.
Naizvozvo zvakakosha kuenda kukambani yemutemo inonzwisisa zvakajeka mitemo inoshanda, pamwe nengozi ingangove nenyaya ingave iinayo, uye izvo zvinosanganisira kukanganisa kwemutemo kune njodzi dzinogona kuvepo.
Tinokunda Mazhinji akakwira nhoroondo yemakesi
Isu tinomiririra vatengi pamatanho ese ezviito